Feature May 26, 2020
Written by Moe Moe HI Burma May 14, 2020 “လူသားချင်းစာနာတယ်ဆိုတော့ ကျမက လူသားမဟုတ်လို့လား။ အပြစ်သားကို စာနာပြီး ဘဝပျက်ခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးကိုရော မစာနာတော့ဘူးလား” ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတက လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကို အလေးထားတဲ့အနေနဲ့ဆိုပြီး နိုင်ငံတဝှမ်း အကျဉ်းထောင်အသီးသီးက အကျဉ်းကျနေသူတွေကို ပေးခဲ့တဲ့...
Feature May 25, 2020
Written by Moe Moe HI Burma May 22, 2020 ပေ ၃၀ ပတ်လည်တိုက်ခန်းလေးဟာ သိပ်မကျယ်လှပေမယ့် သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖွဲ့ထားတဲ့ အခန်းလေးတွေကြောင့် ကြည့်ကောင်းနေပါတယ်။ သိပ်မများတဲ့ ကစားစရာတွေနဲ့ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ ဒီအခန်းလေးဟာ တခါတရံ ကလေးဆော့တဲ့အသံနဲ့ သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေပေမယ့် အချိန်အတော်များများမှာတော့ တိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်နေပါတယ်။ “အခုကာလက ဟိုး… အစကို ပြန်ရောက်သွားသလို...
Feature February 15, 2020
ကြက်နှင့်ငါးတွဲမွေးသည့်စနစ်ကို နိုင်ငံအတော်များများက စွန့်ပယ်လာကြ သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသည်။ စီးပွားရေးအရတွက်ခြေကိုက်သော်လည်း တစ်ဖက်က ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်မှုများ ရှိနေသည့် ထိုစနစ်ကြောင့် ပြည်ပဈေးကွက်ထိခိုက်မည်ကို ပို့ကုန်သမားများက စိုးရိမ်ကြသည်။ ဇော်ရဲသွေး/Myanmar Now အသားဓာတ် (ပရိုတိန်း) လည်းကြွယ်ဝ၊ အဆီပါဝင်မှုလည်းနည်းသည်ဟု လက်ခံထားကြသည့် ငါးကို သင်ဟာ ပုံမှန်စားသုံးသူဆိုပါက သင့်ဟင်းပန်ကန်ထဲရှိ ငါးများသည်...
Feature February 4, 2020
မျိုးသုဉ်းအန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် တိရစ္ဆာန်များကို ကာကွယ်ပေးထားသည့် ဥပဒေများ ရှိလျက်ပင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုန်သွယ်ရေးအချက်အချာမြို့များတွင် သင်းခွေချပ်များကို စားရန် ဖြစ်စေ၊ တခြားအသုံးချရန်အတွက်ဖြစ်စေ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေကြသည်။ တင်ထက်ပိုင် Published on Feb 4, 2020 မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မျိုးသုဉ်းလုနီးပါး တိရစ္ဆာန်တစ်မျိုးဖြစ်သည့် သင်းခွေချပ်ကောင်၏ အစိတ်အပိုင်းသုံးခုကို မန္တလေးမြို့ရှိ ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် လျန်...
123...1919 ၏စာမျက်နှာ 1